एक दिवसीय मान्यताका लागी भोली नेपाल र पपुवा न्युगिनी खेल्दै , अग्रीम सुभकामना सहीत लाईक सेयर गरौ ! – My Blog
Home खेलकुद एक दिवसीय मान्यताका लागी भोली नेपाल र पपुवा न्युगिनी खेल्दै , अग्रीम सुभकामना सहीत लाईक सेयर गरौ !
एक दिवसीय मान्यताका लागी भोली नेपाल र पपुवा न्युगिनी खेल्दै , अग्रीम सुभकामना सहीत लाईक सेयर गरौ !
starnews - Mar 14, 20180017
काठमाडौं– आइसिसी एकदिवसीय विश्वकप छनोटअन्तर्गत प्लेअफको खेलमा बिहीबार (भोली) नेपाल र पपुवा न्युगिनी (पिएनजी) बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । जिम्बावेको हरारेस्थित हरारियन स्पोर्ट्स क्लबमा हुने खेलमा जित हात पार्ने टिम एकदिवसीय मान्यता नजिक पुग्नेछ।
४ वर्षका लागि प्राप्त हुने एकदिवसीय मान्यताले टिमको एक्सपोजर बढ्ने र आइसिसीबाट प्राप्त हुने अनुदान पनि बृद्धि हुने भएकाले प्लेअफको खेललाई महत्वपूर्ण मानिएको छ।
प्रतियोगितामा नेपालले सुपर ६ पुग्ने र एकदिवसीय मान्यता प्राप्त गर्ने लक्ष्य बनाएको थियो। सुपर ६ पुग्न असफल भएको नेपालका लागि एकदिवसीय मान्यताको सुनौलो अवसर छ। त्यसका लागि नेपालले पपुवा न्युगिनीलाई पराजित गर्नुपर्ने हुन्छ।
एकदिवसीय मान्यताका लागि नेपालको ठूलो चुनौती ब्याटिङमा देखिएको छ। यो प्रतिस्पर्धामा बलिङमा औषत प्रदर्शन गरेको नेपालका प्रमुख ब्याट्सम्यान चल्नुपर्ने देखिन्छ। कप्तान पारस खड्का बाहेक अन्य कुनै पनि ब्याट्सम्यानले जारी प्रतियोगितामा अर्धशतक प्रहार गर्न सकेका छैनन्। यद्यपी नेपालले हङकङलाई पराजित गर्दा रोहितकुमार पौडेलले नटआउट ४८ रन बनाएका थिए।
नेपालले पिएनजी विरुद्ध नयाँ मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। मैदानको ‌पहिलो इनिङको औसत स्कोर ३ सयको हाराहारीमा छ। त्यसैले जितका लागि ३ सय रन कटाउनेगरी खेल्नु जरुरी देखिन्छ। प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा नेपालले जिम्बावे विरुद्ध २ सय ६४ रन बनाएको थियो। त्यसपछिका ३ खेलमा नेपालले २ सय रन कटाउन सकेको छैन। पहिले ब्याटिङ गर्दा नेपालले स्कटल्यान्ड विरुद्ध १ सय ४९ र अफगानिस्तान विरुद्ध १ सय ९४ रन बनाएको थियो।
पिएनजीले समूह चरणमा चारै खेल हारे पनि ब्याटिङमा भने राम्रो प्रदर्शन गरेको थियो। टोनी उराले आयरल्यान्ड विरुद्ध शतक प्रहार गरेका थिए। युएई विरुद्धको पहिलो खेलमा १ सय १३ रनमा अलआउट भए पनि पिएनजीले आयरल्यान्ड विरुद्ध २ सय ३५ रन बनाएको थियो। पिएनजीले वेस्ट इन्डिज विरुद्ध पनि २ सय रन बनायो। नेदरल्यान्ड्स विरुद्धको अन्तिम खेलमा भने पिएनजी १ सय ५९ रनमा अलआउट भयो।
पुरानो हरारियन स्पोर्ट्स मैदानको तथ्यांक
पहिलो इनिङको औषत स्कोर : २९० रन
दोस्रो इनिङको औषत स्कोर : १९६ रन
मैदानको उच्च स्कोर : ३५७/४
मैदानको कम स्कोर : ९१/१०
उच्च लक्ष्य पार : २०१ रन
नेपाल र पिएनजीबीच सन् २०१५ पछि पहिलोपटक प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो। सन् २०१५ मा आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप अन्तर्गत पिएनजी विरुद्धका दुवै खेलमा नेपाल पराजित भएको थियो।
अबुधावीमा भएको पहिलो खेलमा नेपाललाई पिएनजीले २ विकेटले हराएको थियो। पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले ५० ओभरमा ८ विकेटको क्षतिमा २ सय ३२ रन जोड्यो। नेपालका लागि सुवास खकुरेलले ६३ रन र शरद भेषावकरले ७८ रन जोडेका थिए। पिएनजीले ३ बल खेल्न बाँकी छँदा ८ विकेटको क्षतिमा लक्ष्य पार गरेको थियो।
दोस्रो खेलमा पिएनजी ३ विकेटले विजयी भयो। पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले ८ विकेटको क्षतिमा २ सय २४ रन जोड्यो। नेपालका लागि पारस खड्काले ४८ रन जोड्दा सागर पुनले ४७ रन र शरद भेषावकरले ४२ रन जोडेका थिए। पिएनजीले २ बल बाँकी छँदा ७ विकेटको क्षतिमा लक्ष्य पार गरेको थियो। सोमपाल कामीले ३ र बसन्त रेग्मीले २ विकेट लिए पनि जित हात पार्न सकेन।
समूह चरणमा नेपालका कप्तान पारस खड्काले तारिफयोग्य ब्याटिङ गरे। जिम्बावे विरुद्धको पहिलो खेलमा उनले ४० रन जोडे। त्यसपछि लगातार दुई अर्धशतक प्रहार गरे। उनले स्कटल्यान्ड विरुद्ध ६३ र अफगानिस्तान विरुद्ध ७५ रन प्रहार गरे। दुवै टिम प्रतियोगिताकै उत्कृष्ट बलिङ आक्रमण भएको टिम मानिन्छ। हङकङ विरुद्ध पारस ११ रनमै आउट भए। तर, खेल जित्दै नेपालले एकदिवसीय मान्यता पाउने ढोका खोल्यो।
उराले विश्वकप छनोटको दोस्रो खेलमा आयरल्यान्ड विरुद्ध शतक प्रहार गरेका थिए। ओपनर उराले १ सय ५१ रन प्रहार गरेपछि पपुवा न्युगिनीले २ सय ३५ रन जोडेको थियो। उराको शतकका बाबजुद पपुवा न्युगिनी खेलमा पराजित भयो। तर, उनी खेलको म्यान अफ दि म्याच भए। नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध ३७ रन प्रहार गरेका उनी वेस्ट इन्डिज विरुद्धको खेलमा ३ रनमै आउट भएका थिए।
टिम पपुवा न्युगिनी
असद भाला (कप्तान), चार्ल्स अमिनी, सेसे बाउ, माहुरु दाइ, किप्लिन डोरिगा, जासोन किला, भानी मोइरा, अलेइ नाओ, दामेइन राभु, जोन रिभा, लेगा सिएका, चाड सोपर, टोनी उरा, नोर्मान भनुवा, ज्याक भारे।
Previous Postनायिका “प्रियंका कार्की” आमा बन्दै
Next Postबिमानका पाइलटको बिषयमा नयाँ तथ्य : राजिनामा दिइसकेका पाइलटलाई के जबरजस्ती जहाज उडाउन लगाइएको थियो ? (भिडियो सहीत),
खाना पकाउने ग्याँस सिलिन्डर पड्किंदा एक दर्जन घर खरानी
नेपाल लाई अर्को सफलता : नेदरल्यान्ड सातौ विकेटको पतन